Thursday, 23 Jan, 2020 3:58 PM
९ माघ, काठमाडौं । बच्चाको सम्पूर्ण विकासका लागि दूधका साथै दूधबाट बनेका परिकारहरु पनिर, मख्खन, चीज, दही जस्ता खानेकुराको जरुरत हुन्छ जसमा प्रोटिन तथा क्याल्शियम हुन्छ । जसले बच्चाको मांशपेशी र हड्डी बलियो बनाउनुका साथै उचाइ बढ्नमा मद्दत गर्छ । साथै यी उपाय अपनाए पनि बाच्चा चाँडै बढ्छन् ।
१. बढ्दै गरेका बालबालिका निद्रा पुग्ने गरी सुतेका छन् कि छैनन, ध्यान दिनुहोस् । उनीहरुका लागि कम्तीमा पनि १० देखि १२ घन्टा सुत्नु आवश्यक छ । सुत्दा ग्रोथ हार्मोन उत्पादन हुन्छ र वृद्धिलाई सघाउ र्पुयाउँछ । आराम नगर्दा पनि बच्चाको हाइट ठीकसंग बढ्दैन ।
५. बालबालिकालाई चिया, कफीको बानी पर्न नदिनुस् । यी चिजमा क्याफिन हुन्छन, जसले उनीहरुको वृद्धिमा असर पर्छ । दैनिक ८ देखि १० गिलास पानी पिउने बानी बसाल्न सिकाउनुस् ।